lulu: ၀ဥသုပ် (တောသုပ်)
at 11:33 AM Labels: အသုပ်
ဒီနေ့တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်အောင်၊ diet လုပ်ချင်သူတွေအတွက်လည်း
အဆင်ပြေသွားရအောင် ၀ဥသုပ်လေး သုပ်ကျွေးပါရစေနော်။ ၀ဥကို အင်္ဂလိပ်လို yam
tuber လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သိပ္ပံအမည်ကတော့ Amorphophallus campanulata လို့
ခေါ်ပါတယ်နော်။ အခု ကျွန်မသုပ်မယ့် ၀ဥကတော့ သဘာဝအတိုင်း ရလာတဲ့ ၀ဥကို
အခွံနွှာ၊ ရေဆေး၊ ၀ဥတွေကို မုန့်ကြိတ်သလိုကြိတ်ပြီးတော့မှ
၀ဥကို သုပ်စားတာအပြင် မျှစ်ချဉ်ဟင်းနဲ့ချက်တဲ့အခါတို့၊
တာလပေါဟင်းချက်တဲ့အခါတို့၊ သတ်သတ်လွတ်ဟင်းတွေ ချက်တဲ့အခါမှာ အဓိကထားပြီး
သုံးကြပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာတော့ ၀ဥသုပ်လေး(တောသုပ်)ကျွေးပါရစေနော်။
၀ဥသုပ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ၀ဥ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊
ငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့်၊ အချိုမှုန့်၊ သံပုရာရည်တို့ပါနော်။
(ဆီချက်၊ ပဲမှုန့်အကျက်မှုန့်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်တို့၊ ရှောက်ရွက်၊
ဈေးက၀ယ်လာတဲ့ ၀ဥကို ရေလေးလိုက်ပါဦးနော်။ ပြီးတော့မှ ၀ဥကို
ပြီးရင် မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးတင်ပြီးတော့ ဒယ်အိုးကို
ဆီလေးနည်းနည်းသုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ လှီးထားတဲ့ ၀ဥလေးတွေကို ဒယ်အိုးမှာ
စီစီရီရီတင်ပြီး ၀ဥကို မီးအသင့်အတင့်နဲ့ လှော်ပေးပါနော်။
အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ၀ဥထဲ အရသာလေးနည်းနည်းဝင်သွားပြီး
ရေဓာတ်နည်းနည်းခမ်းသွားတဲ့အတွက် စားတဲ့အခါမှာ ထုတ်ထုတ် ထုတ်ထုတ်နဲ့
၀ါးလို့ကောင်းလှပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ၀ဥကို ခပ်ပါးပါးလေးတွေဖြစ်အောင်
ပြန်လှီးပေးထားပါနော်။ ကြက်သွန်နီကိုလည်း အခွံနွှာ၊ ရေဆေး၊ ပါးပါးလှီးပြီး
ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ညှစ်ပေးထားပါ။ ကြက်သွန်မြိတ်ကိုလည်း ရေဆေးပြီး
ပါးပါးလှီးပေးထားပါ။ သံပုရာသီးကိုလည်း ရေဆေးပြီး အစိပ်လေးတွေ
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ဇလုံတစ်လုံးထဲကို လှီးထားတဲ့ ၀ဥ၊
ကြက်သွန်နီ၊ ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့်၊ ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့်နဲ့
သံပုရာရည်တို့ကိုထည့်ပြီး လက်သန့်သန့်နဲ့ နယ်ပေးပါနော်။ ပြီးတော့မှ
ထောင်းထည့်လိုက်ပါဦးနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ချဉ်ငံစပ်အရသာလေးနဲ့
၀ဥသုပ်လေး ရပါပြီနော်။ ငရုတ်ကောင်းဟင်းခါးလေးနဲ့ တွဲပြီး
မြရွက်ဝေ February 23, 2008 at 4:36 PM
ဝဥသုပ်လဲ အရမ်းကြိုက်တာ မလုလုရေ။
ရန်ကုန်မှာက ဝဥကို လေးချိန်နဲ့ရောင်းပြီး ဈေးကြီးတော့ လုံးဝ မတန်ဘူး။
ဖားအံမှာတော့ အတုံးလိုက်ကြီးကိုမှ တစ်ရာ(အရင်ကဈေး)ကျော်လောက် ပေးရပြီး တအိမ်လုံး စားလို့ရတယ်။ လွမ်းပါ့ ရွှတ်ဖတ်။
ဒီမှာလဲ ဝဥရတယ်။ "ကွန်းညကု"လို့ခေါ်တယ်။ အရသာအတူတူပေမယ့် ပြုတ်တုန်း အနံ့အတော်ပြင်းတယ်။ လှော်လိုက်တော့ ပျောက်သွားတယ်။ အတော်တော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လှော်ရတယ်။ အိမ်မှာတုန်းက ဆီချက်၊ ပဲမှုန့်အကျက်မှုန့်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်တို့၊ ရှောက်ရွက်နဲ့ သုပ်စားတယ်။ ဒီမှာ ကျမနေတဲ့အနားမှာ ရှောက်ရွက်မရတော့ လီမွန်အခွံကို နုပ်နုပ်စဉ်းပြီးထည့်လိုက်တယ်။ ဘလော့ထဲမှာလဲ တင်ဖူးသေးတယ်။
Toe July 13, 2010 at 7:41 PM
hello ma ma lu,
We are staying in singapore.
That's why I can't get " war oo"
Can you tell me how to make it.
I m waiting methad from you